१ शियर गर्नुहोस र तपाईको कस्तो छ शनिबारको भाग्य? असार १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
June 26, 2021 khabarmazzakoLeaveaComment on १ शियर गर्नुहोस र तपाईको कस्तो छ शनिबारको भाग्य? असार १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
सिहंः नयाँ नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा बढोत्तरि हुँने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने उद्योगमा लगानि गरि रोजगारिका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिनेछ । सभा समारोहमा सहभागि हुने निम्तो आएपनि आफ्नै कार्य ब्यस्तताले जान नपाइन सक्छ । बुवा या बुवा सरहका मानिसबाट तपाईको काममा सहयोग हुँने हुँदा अन्य काम गर्न सहज हुँनेछ । सरकारि तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईको बर्चस्व कायम रहनेछ भने माया प्रेममा एक अर्कालाई बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ ।
धनुः आफन्त तथ मावलि पक्षको सहयोग पाईने हुँनाले कामहरु गर्न उर्जा पैदा हुँनेछ । बिद्या तथा प्रतिष्पर्धामा प्रतिष्पर्धिहरुलाई हराउँदै सकारात्मक नतिजा हात पार्न सकिनेछ । व्यापारमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ । थोरै लगानिबाट यथेष्ट लाभ लिन सकिनेछ । अदालति निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा आउँने भएको हुँनाले न्याय पाएको अनुभुति हुँनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ ।
कुम्भः आमा तथा आमा सरहका मानिस सँग बिवाद बढ्ने योग रहेको छ । सामान्य छाति सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ख्याल गर्नुहोला । प्रतिश्पर्धिहरुले काममा अवरोध पु¥याउन सक्छन् ध्यान दिनुहोला । अध्ययन तथा अध्यापनमा तपाई आफ्नै कारणले पछि पर्नु हुँनेछ । व्यापार व्यावसायमा प्रसस्त समय दिनु पर्नेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । आत्मिय साथि तथा आफन्तसँग दुरी बढ्ने योग रहेकोछ । मध्यान्ह पछि यहाँको दिन शुभ रहनेछ ।
मीनः व्यावसायिक यात्राको तयारि गर्न सकिनेछ भने यात्रा उलिब्धिमुलक नै रहनेछ । पढाई लेखाईमा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्ने योग रहेकोछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने योग रहेकोछ । शाहसिलो काम गरि नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । साझपख आमा वा घर परिवारका आफुले मान्नु पर्ने मानिसहरुको सल्लाह तथा सुझाबलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहोला । सभा समारोहमा सहभागि भई मिठा मिठा परिकार लिने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
जातीय कुराको अन्त्य गर्ने भए आउनुहोस हामी बिबाह गरौं रुपाजी तपाईं कामी म सार्की ! सक्नुहुन्छ
ॐ लेखी भेटि स्वरुप एक सेयर गर्दै आजको राशिफल पढाैँ यी राशी हुनेहरु लाई मिल्नेछ ठुलो सफलता
June 28, 2021 khabarmazzako
वैशाख २८ २०७८, मंगलवार : आजको राशिफल
May 11, 2021 khabarmazzako